Y YOKUFUNDA IIMOTORS - izinciphisi, izixhobo ezinciphisa iintshulube, iibhokisi zeeplanethi, iisantya ezinciphisa isantya, umahluko, iihelical gear, ii-gear zentsimbi, ezemidlalo, iibhokisi zeetrektara, iigi zelori
Y YOKUFUNDA IIMOTO
Ikhaya / imoto / Y YOKUFUNDA IIMOTO
Y uthotho lweeMotors Iimoto ze-Y zisezantsi-ombane ze-asynchronous motors, ezisisiseko esisisiseko senjongo ngokubanzi. Olu ngcelele lweemoto lunokuhlangabezana neemfuno ngokubanzi zeenjongo zeemoto ngaphakathi nangaphandle kwezikwere ukusuka ku-80 ukuya ku-315. Olu ngcelele lweemoto ziyilelwe ngokomgangatho omanyeneyo wesizwe. Iimoto zechungechunge lwe-Y zinezibonelelo zokusebenza okuphezulu, ukonga umbane, ukusebenza ngokugqwesileyo, ukungcangcazela okuncinci, ingxolo esezantsi, ubomi benkonzo ende, ukuthembeka okuphezulu kunye nokugcinwa ngokulula. Imilinganiselo yokunyuka kunye nenqanaba lamandla lihambelana ngokupheleleyo nomgangatho we-IEC. Bakudidi lwe-B lokugquma, isidanga se-IP 44 sokukhusela kunye neendlela zokupholisa ze-IC411. Amandla ombane alinganisiweyo kunye nokuhamba rhoqo kwe-series ye-Y ngokulandelelana zi-380v kunye ne-50HZ. Unxibelelwano lwe-Y lwenzelwe iimoto ezingaphantsi kwe-3kw (3kw ifakiwe) kwaye △ unxibelelwano lwamkelwe kwezi zingasentla kwe-4kw (4kw ifakiwe). Iimoto ze-Y zihlala zisetyenziswa kwizixhobo zoomatshini ngaphandle kwemfuneko ekhethekileyo.
Y YOKUFUNDA UMHLA WOBUGCISA